Bogga ugu weyn 15 Barnaamijyada Lacag -Sameynta ugu Fiican ee iPhone Degdegga ah | 2022 Liiska
Barnaamijyada Lacag -Sameynta ugu Fiican ee iPhone
Kumanaan qof oo adeegsada Iphone -ka ayaan wax fikrad ah u haynin inta lacag ee barnaamijyadooda ay u abuuri karaan. Wax badan ayaa waqti aad u xun ku qaata taleefankooda maalintii oo dhan iyagoo aan kasban lacag kaash ah.
Haddii barnaamijyada aad ku haysato iPhone -kaaga, aysan dakhli kuu soo saarin, markaa hubaal waxaad u baahan tahay inaad akhrido maqaalkan.
Halkan imbibe 15 apps cajiib ah oo lacag samaynta ugu fiican ee isticmaalayaasha iPhone. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa soo dejiso oo bilow inaad lacagtaada ku sameyso apps-kan.
Barnaamijyada lacag -sameynta ayaa had iyo jeer ah badbaadiyeyaal markaad u baahan tahay lacag dheeri ah si aad u kaabto dakhligaaga caadiga ah. Mararka qaarkood, barnaamijyadani waxay u adeegaan sidii dhinac u riixaya si loo helo dakhli ku filan si aad u bixiso biilashaada inta aad kaydinayso dakhligaaga bishii.
Haddii aad tahay adeegsiga taleefanka Android ama aaladda iOS, barnaamijyada macaashka leh ee ku jira liiskayaga ayaa kuu shaqayn doona. Waxaan kuu fududaynay annagoo u kala saarnay saddex qaybood oo kala duwan:
Barnaamijyada Lacag -Sameynta ugu Fiican ee loogu talagalay iPhone sannadka 2022 -ka
Barnaamijyada ugu wanaagsan ee iPhone ee Hustle ee Lacag lagu helo 2022
Barnaamijyada Dakhliga Dakhliga ah ee iPhone si ay lacag u helaan 2022
Best iPhone Barnaamijyada Lacag Sameynta ee Lacag Caddaan ah Soo Celiya 2022
Inta badan apps iPhone waa apps lacag-samaynta kuwaas oo dakhli ka soo saara ciyaaraha ciyaaraha, sahan online, iibinta alaab duug ah ilaa kasbato dakhli dadban.
Waxaad ku soo dejisan kartaa dhammaan barnaamijyadan lacag la'aan oo weli waxaad samayn kartaa lacag caddaan ah oo dheeraad ah oo aad had iyo jeer rabto. Si aad lacag ku hesho, waxaad filan kartaa inaad ku hesho dakhligaaga qaab PayPal lacag caddaan ah, kaarar hadiyad oo lacag la’aan ah oo ka socda magacyo caan ah, jeegag, ama wareejinta bangiga tooska ah.
Marka, haddii aad diyaar u tahay inaad samayso xoogaa lacag caddaan ah - taas oo aan hubo inay tahay sababta aad u akhrinayso maqaalkan - markaa bilow inaad rakibto barnaamijyada aan hoos ku hayno.
Swagbucks waa hal app iPhone oo xiiso leh oo aad lacag ku kasban karto adigoo ciyaaraya ciyaaro. Waa kan ugu caansan “lacag lagu siiyo” barnaamijyada loogu talagalay taleefannada IOS.
Waxaa lagu siin karaa lacag si aad u samayso ku dhawaad ​​wax kasta oo aad hore ugu jirtay ama xor u ahayd, sida
Codbixinta maalinlaha ah
Soo deji app-kan oo hel dhibco abaal-marin ah oo lagu soo furan karo kaadhadhka hadyada ku dhawaad ​​$300. Swagbucks sidoo kale waxay siisaa $10 gunno isticmaalayaasha cusub.
Runtu waxay tahay, ma jiro wax xad ah inta aad ka kasban karto Swagbucks waxaadna si fudud ugu soo ceshan kartaa abaalmarinnadaada lacag caddaan ah koontadaada PayPal.
Iyadoo qiimeynta A ee Xafiiska Better Business Bureau iyo 20 milyan oo isticmaaleyaal firfircoon ah, Swagbucks waxay u soo baxaysaa sida apps lacag-samaynta ugu fiican ee aaladaha iOS.
Dadka akhriya maqaalkan, waxay ku dambeeyaan akhrinta: Dib -u -eegista Swagbucks ee La Cusboonaysiiyay: Ma Xalaalbaa Mise Waa Lacag Lacag La Iskugu Diro Online.
# 2. Decluttr
Decluttr waa app aad ku iibin karto waxyaabaha la isticmaalay ama aan la rabin internetka ama xitaa gudaha.
App -kan ayaa fududeynaya iibinta waxyaabaha soo socda ee la isticmaalo ee jiifa agagaarka gurigaaga:
Kadib marka aad soo dejiso app-ka, ka sawir barcode-ka shayga aad rabto in aad iibiso si aad u hesho sumad qiimo degdeg ah Marka aad dhammayso iskaanka dhammaan walxaha aad rabto inaad iibiso, Decluttr waxay soo dirtaa calaamad dhoofin bilaash ah.
Haddii ay helaan alaabtaada oo ay jecel yihiin, waxaa lagugu siin doonaa PayPal.
Dadka akhriya maqaalkan, waxay ku dambeeyaan akhrinta: Faallooyinka Decluttr 2021 Online: Sida Lacag Looga Sameeyo Decluttr.
Haddii aad ku raaxaysato dukaamaysiga, markaa waxaa laga yaabaa inaad lacag uun ku qaadato inaad samayso waxaad jeceshahay.
Shopkick waa app xiiso leh oo bixiya si loo eego qiimaha dukaamada deegaankaaga. Marka laga reebo mushaharka aad ka hesho hubinta qiimaha, waxaad sidoo kale kasban kartaa dhibco abaal-marin dheeraad ah oo ay ugu yeeraan "Kicks" wax-soo-iibsashada onlaynka ah ama daawashada fiidyaha app-ka.
Qaab kale oo aad uga kasban karto Shopkick waa adiga oo iska baara barcode.
Waxaad ku soo ceshan kartaa dhibcahaaga abaalmarin ahaan kaararka hadiyadda dukaamada iyo makhaayadaha xaafaddaada.
Akhriso Dib -u -eegistayada Daacadda ah: Dib -u -eegista Shopkicks 2021: Sharci ama Fadeexad/Sida ay u Shaqeyso.
Rakuten waa barnaamij kale oo lacag samayn ah oo iPhone ah oo loogu talagalay dadka jecel wax iibsiga ee internetka.
Isticmaalayaal cusub, waxaad ku raaxeysan kartaa Rakuten adigoo:
Isku qoritaanka halkan $ 10 gunno soo dhaweyn ah
Markaa booqo Rakuten marka hore markaad rabto inaad wax ka iibsato onlayn oo guji dukaanka aad doorbidayso
Ku dukaamee internetka sidaad caadada u ahaan lahayd
Lacag -celinta ayaa si otomaatig ah loogu xisaabin doonaa koontadaada
Rakuten waxay magac u samaysatay iyada oo la shuraakoowday in ka badan 2,500 tafaariiqle ee Maraykanka. Isticmaale cusub ahaan, waxaad heli kartaa qiimo dhimis fiican markaad internetka wax ka iibsanayso.
Waxaa jiri doona gunno dheeraad ah oo $ 10 ah oo ka muuqan doonta koontadaada markaad samaysay iibsigaagii ugu horreeyay ugu yaraan $ 25.
Dadka akhriya maqaalkan, waxay ku dambeeyaan akhrinta: Dib -u -eegista Rakuten.com 2021: Ma Xalaalbaa Mise Waa Fadeexad | Sidee u Shaqaysaa.
Sweatcoin waa barnaamij jirdhis oo bilaash ah kaas oo ku siin doona inaad firfircoonaato.
Markaad iska diiwaangeliso Sweatcoin, waxaad kasban kartaa 0.95 Sweatcoin 1,000 tallaabo kasta oo aad qaaddo iyo 5sweatcoin saaxiib kasta oo aad tixraacdo.
Kani waa sida Sweatcoin u shaqeyso; appku wuxuu tiriyaa tillaabooyinkaaga maalin gudaheed wuxuuna ku siinayaa Sweatcoins.
Yu wuxuu markaa ku soo furan karaa Sweatcoins -kaaga lacag caddaan ah oo PayPal ah, iPhones, qalabka ciyaaraha, iyo saacadaha Apple.
Dhanka kale, waxaad arki kartaa jawaabta su'aasha: Sweatcoin ma sharci baa? Sweatcoin Ammaan ma u tahay in la maalgashado 2022?
Dadka akhriya maqaalkan, waxay ku dambeeyaan akhrinta: Waa maxay Abaalmarinta Sweatcoin & Qiimaha 2021?.
App -ka hustle app wuxuu noqon karaa hab fudud oo lacag badan lagu kasbado markay muhiim tahay. Barnaamijyadan xiisaha leh ee iPhone -ka ayaa ku gaarsiin doona heer kale adiga oo siinaya hab macquul ah oo lagu kasbado dakhli macquul ah.
Haddii aadan wali ka soo dejisanayn barnaamij iPhone -kaaga oo u shaqeeya sidii hustle dhinac ah, markaa kani waa waqtigaaga.
#6. Sahanka Junkie
Sida magacu yahay, goobtani waxay bixisaa sahanno badan oo khadka tooska ah waxayna malaayiin isticmaaleyaal ku leeyihiin goobtooda.
Survey junkie waa goob xalaal ah oo lagu kasbado lacag caddaan ah oo dheeri ah inta aad ku dhex mushaaxayso internetka, cunayso qadadaada, ama xitaa ka nasanayso walaaca maalinta.
Kani waa mid ka mid ah app -ka ugu fiican ee lagu kasbado ama lacag lagu helo inta aad ku jirto hawl kale.
Markaad is -qorto, waxaad isla markiiba bilaabi kartaa qaadashada sahanka. Si aad lacag uga hesho Survey Junkie, waxaad codsan kartaa kaararka hadiyadda ama deebaajiga lacagta PayPal.
Dadka akhriya maqaalkan, waxay ku dambeeyaan akhrinta: 25+ Sahankii Online -ka ee Lacag -bixinta ugu Fiicanaa 2021 | Samee Lacag Sameynta Wax Yar
#7. Cilmi -baarista Pinecone
Haddii aad u aragto inay ku habboon tahay inaad la wadaagto ra'yigaaga ku saabsan badeecad ama adeegyo, markaa waa inaad sidoo kale lacag ku bixisaa.
Cilmi -baarista Pinecone ayaa kugu soo biirin doonta sahaminta onlaynka ah si aad ula wadaagto ra'yigaaga.
Filo inaad kasbato qiyaastii $ 3 - $ 5 sahankii la dhammaystiray.
Doordash waa mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee loogu talagalay ardayga kuleejka. Adiga oo ah arday jaamacadeed, uma baahnid inaad haysato baabuur si aad cunto ugu keento lacag caddaan ah.
Waxaad u shaqayn kartaa darawal ahaan DoorDash intaad cuntada ka soo qaadanayso makhaayadaha maxalliga ah oo aad u gudbinayso macaamiisha.
Darawal ahaan, waxaad kasban kartaa lacag caddaan ah oo dheeri ah marka DoorDash ay bixiso dallacsiin iyo caqabado gaar ah, marka laga reebo mushaharkooda caadiga ah.
Markaad gaarto 18 sano, oo leh liisan darawalnimo iyo caymis ansax ah, waxaad iska qori kartaa DoorDash.
Kani waa xagal -daac kale si aad u kasbato lacag caddaan ah oo dheeri ah.
Saaxiibada boostada ayaa lacag kaa siiya si aad u keento raashinka, cabbitaanka, cuntada makhaayadda ee degaankaaga. App -ku wuxuu fududeynayaa gaarsiinta isagoo ku siinaya faahfaahin kasta oo aad ugu baahan tahay gaarsiinta kasta.
Saaxiibada boostada ayaa sidoo kale kuu soo diraya boorso lacag la'aan ah iyo kaarka horay loo sii bixiyay si shaqadaadu u fududaato.
Maadaama aad tahay boosteeye Postmate, waxaad dooran kartaa inaad shaqeyso mar kasta oo aad jeceshahay. Sidoo kale, waad haysan kartaa 100% dakhligaaga marka aad hesho lacag -bixinta.
MobileXpression waa shirkad cilmi baaris oo suuq ah oo kugu abaalmarineysa inaad si fudud ugu rakibtay barnaamijkooda aaladdaada gacanta.
App-kan waxa uu ururiyaa xogta isticmaalka intarneedka marka aad rakibto. Haddii aad ku qanacsan tahay siyaasaddooda khaaska ah, waxaad heli kartaa $5 kaarka hadiyadda Amazon marka aad ku hayso abka 7 maalmood oo keliya.
Haddii hadhaaga taleefankaaga, waxaad sii wadataa inaad kasbato dhibco aad ku iibsan karto kaararka hadiyadda.
Barnaamijyada Dakhliga Dakhliga Ugu Fiican ee iPhone ee Lacag lagu kasbado 2022
#11. Nasiib wanaag
Lucktastic waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu fiican ee aad u baahan tahay inaad ku rakibto iPhone -kaaga oo aad sameyso dakhli dadban.
Adigoo wata Lucktastic, waxaa lagu siin karaa lacag aad ku ciyaarto ciyaaraha oo aad kasbato calaamado la soo furan karo oo ay ku jiraan kaararka hadiyadda ee Amazon oo lacag la’aan ah.
Lucktastic waa 100% bilaash si loo soo dejiyo. Markaad rakibto, waxaad bilaabi doontaa inaad kasbato ilaa $ 10,000 adoo ciyaaraya kaararkooda xoqan.
#12. Upwork ama Fiverr
Fiverr iyo Upwork waa suuqa ugu caansan ee iskood u shaqeysta halkaas oo aad ku suuqgeyn karto adeegyadaada oo aad ku heli karto heeso si aad lacag u hesho.
Kuwani waa meesha ugu weyn adduunka ee lagu suuqgeeyo adeegyadaada dhijitaalka ah iyadoo la adeegsanayo aaladahaaga.
Haddii aad ogaato inaad lacag aad u badan ku bixineyso caymiska baabuurkaaga, telefishanka fiilada, ama adeegyada taleefanka gacanta, Trim ayaa kaa caawin doonta inaad dalabka xayeysiinta ugu fiican u adeegsato qorshahaaga hadda.
App -kan ayaa kaa caawin doona inaad adiga u qabato dhammaan shaqada gorgortanka adag.
In kasta oo abkaan moobiilku aanu kaa caawinayn inaad lacag samaysato, kaydinta lacagta adoo hagaajinaya miisaaniyaddaada ayaa ah hab dadban oo lacag lagu kasbado adigoon bilaabin buuq dhinac ah.
Haddii aad u isticmaashay buugaagta wax lagu barto si aad u iibiso, BookScouter waa iibiyahaaga dib -u -iibsiga.
Mar alla markii aad soo dejiso barnaamijkan, tallaabada xigta waa in lagu baaro barcode ama lambarka ISBN ee barnaamijka si aad u hesho xigasho qiimo deg -deg ah.
Waxaad markaa dooranaysaa iibiyaasha ugu mushaharka badan oo aad u dirtaa buugaagtaada sumadda dhoofinta bilaashka ah ee ay soo dirtay BookScouter.
Guul waa barnaamij kale oo dadban oo lacag ku siiya jimicsi.
Barnaamijkani wuxuu la mid yahay barnaamijka Apple Health ama aaladdaada jirdhiska ee la qaadan karo si lacag loogu siiyo hawlaha soo socda:
Caadooyinka cunida caafimaadka leh
La wadaag shabakadaha bulshada
Guusha ayaa kugu bixin doonta PayPal ama lacag dhigasho toos ah, sida 1.5 milyan oo xubnood oo kale ay si joogto ah u sameeyaan.
Haddii aad leedahay iPhone, waa waqtigii aad isticmaali lahayd telefoonkaaga. Ha ka mid noqon fasalka raba in ay isticmaalaan calaamada iyaga oo aan ogayn in ay lacag caddaan ah ku heli karaan taleefankooda.
Barnaamijyadan kor ku xusan ayaa ah kuwa ugu fiican ee aad lacag ka samayn karto. Haddii aad diyaar u tahay inaad lacag dheeraad ah ka hesho dhinaca dhinac iyo dakhliga dadban, iPhone -kaaga ayaa kaa caawin kara inaad si raaxo leh u samayso.
10+ Meelaha ugu Fiican ee Lagu Iibsado Telefoonnada La Adeegsaday Qiimo jaban | 2022
Halloween ee Miisaaniyadda: 10 Fikradood oo Lacag lagu keydiyo 2022
Dib -u -eegista App -ka Ojooo: Ma Fadeexad Mise $ 0.04 Gujis kasta?
Sideen kale ugu celin karaa awoodda ama lagama maarmaanka u ah dib u eegista? Oo la xidhiidh dib u eegista alaabta sida…
14 Shaqooyin Qoraal oo Si Wanaagsan u Bixi doona 2022
Ma ogtahay inaad si fiican uga faa'iidaysan karto xirfadahaaga dhegeysiga iyo makiinada qorista…
17 Shaqooyinka Tijaabada Ugu Fiican Oo Si Wanaagsan U Bixi doona 2022
Waxaa jira wax ka badan oo lagu kasbado shaqada oo aan ahayn kaliya in la helo mushahar. Talooyinka ayaa gacan ka geysta in shaqooyinka laga dhigo kuwa caafimaad leh…
Marka laga hadlayo nadiifinta gurigaaga alaabtii hore iyo iibinta shabakadda, Bixinta waa…
Intee In le'eg ayaad kasban kartaa intaad ku jirto Lambarka Bulshada 2022
Sida aad u bedeli karto kaarka badbaadada bulshada, waxaad heli kartaa lacag intaad ku jirto badbaadada bulshada. Mar kasta…